मान्छे हो फरक। थप जटिल - केही वर्ण मा नरम र लचकदार, अन्य छ। जसले तपाईंलाई घमण्डी व्यक्ति छ जसले कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। व्यक्ति यस प्रकारको र व्यक्ति कस्तो?
सुरुमा हामीले छलफल गरिनेछ बारेमा बुझ्न पर्छ। त्यसैले घमण्डी मान्छे - अहङ्कारको भरिएका छन् जो विभिन्न अहङ्कारको छ जो छ। गुण जस्तै मानिसहरूलाई निहित:
त्यस्ता मानिसहरूलाई अक्सर छ उच्च आत्म-सम्मान। अक्सर, तिनीहरूले, अपवाद बिना सबैलाई आफ्नो सर्वश्रेष्ठ पक्ष देखाउन लजालु छैनन् यो अक्सर ठाँउ बाहिर बनाउने।
अहङ्कारको एक बिट
घमण्डी मान्छे - अरूलाई माथि दुवै शाब्दिक र लाक्षणिक अर्थमा आफूलाई ठान्नुहुन्छ गर्ने छ। त्यो राजा र शासकहरूले subordinates जबरजस्ती तिनीहरूलाई bow जबकि, हिल मा आफ्नो स्थान vossedaniya (thrones) राख्नु किन अघि छ। यो प्रवृत्ति उच्च वृद्धि मात्र होइन सुविधा, तर पनि एक विशाल फाइदा हुँदा प्राचीन, यसको जरा छ। त्यसैले, सधैं शारीरिक रूपमा बलियो र ठूलो मानिसहरू मुख्य कुरा पहिले नेताहरूले थिए। यो अरूको भन्दा राम्रो माथि आफूलाई ठान्नुहुन्छ गर्ने व्यक्ति छ, तिनीहरूलाई तिर आफ्नो मनोवृत्ति देखाउन संकोच छैन - यो संग जडान हामी घमण्डी मानिस एउटा सरल निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। अक्सर यस्तो व्यक्ति एक नेता हुन चाहनुहुन्छ, तर टोली यो सम्भव छैन।
प्रकृति र अहङ्कारको
धेरै सोच हुन सक्छ: खरिद र यो गुण? त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्:
मानिसको अहङ्कारको हुर्काउन सक्छन्। सजिलो बनाउन, तपाईं बस सानैदेखि अरूको लागि एक मन नपराइएको र गर्व राखिदिन गर्न आवश्यक छ।
यो कुनै पनि उमेर मा किनेको गर्न सकिन्छ। पुरातन युनानी रूपमा, सफलता अहङ्कारको उक्साउँछ। यो अचानक सबैभन्दा सरल जरा संग, धनी वा सफल भइन् ती मानिसहरूको लागि विशेष गरी साँचो हो। घमण्डी अक्सर तथाकथित बाटो पार गर्ने ती हुन् धन गर्न rags देखि।
पनि टिप्पण लायक यो घमण्ड देखाउनुभएको छ किनभने अहङ्कारको, पाप हो भन्ने छ। एक गर्व - बाइबल, एक व्यक्ति अचाक्ली भएको afterlife मा सजाय गर्न सकिन्छ जसको लागि एक नश्वर पाप अनुसार छ।
को घमण्डी मान्छे को व्यवहार
कसरी त्यो घमण्डी मानिस गरिरहेको छ कि गर्दैन? कुनै सटीक परिभाषा छ र हुन सक्दैन। त्यहाँ अहङ्कारको को धेरै प्रकार छन्: यो इच्छा छ कुराकानीमा गर्न टोन सुधार (बौद्धिक अर्थमा सबैभन्दा अक्सर) एक व्यक्ति humiliate। त्यस्ता मानिसहरूलाई यो धेरै आफूलाई भन्दा Dumber विश्वास, एक विशेष व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, र उसलाई सहभागिता - आफ्नो मर्यादा मुनि। कसरी यस्तो मान्छे सामना गर्न? यसलाई सरल छ: तपाईं बस विश्वस्त हुन आवश्यक छ। राम्रो यद्यपि, जहाँसम्म सम्भव जस्ता व्यक्तित्व संग सम्पर्क बच्न।
पागलपन - यो स्थिति छ?
गैर-मौखिक संकेत को झूट प्रकट। झूट को मनोविज्ञान
Determinism र indeterminism
चेरी पाइ - अन्डा र खमीर बिना पकाना
फुकेत मा मनोरञ्जन स्थानीय तटों भ्रमण गर्न सीमित छैन
सुनगाभा को सबै भन्दा लोकप्रिय प्रकार - Phalaenopsis। कसरी यी सुन्दर बोट हेरचाह गर्न र कसरी गुणन गर्ने?